Emepụtara ụdị ọhụrụ nke Red Hat Enterprise Linux 8 | Site na Linux
Emeputara ohuru nke Red Hat Enterprise Linux 8
Uhie okpu nwere Kwupụtara Mwepụta nke New Version nke Uhie okpu Enterprise Linux 8, mbipute nke e jiri teknụzụ ndị e ji mee ihe na Fedora 28 dịka ntọala iji wuo ohuru ohuru nke Red Hat.
Alaka ọhụrụ dị ịrịba ama maka ịgbanwe na Wayland na ndabara, jiri nftables dochie iptables, na-emelite ihe ndị bụ isi (kernel 4.18, GCC 8), na-eji njikwa ngwugwu DNF kama YUM, na-eji ebe nchekwa modulu, ịkwụsị nkwado maka KDE na Btrfs.
1 Ihe dị ọhụrụ na Red Hat Enterprise Linux 8
1.1 Mgbanwe ndị ọzọ
Ihe dị ọhụrụ na Red Hat Enterprise Linux 8
Na ụdị nkesa ọhụrụ a, atụmatụ ya gụnyere: Gnome 3.28 dị ka desktọọpụ ndabara site na iji ihe nkesa na-egosipụta Wayland kara aka.
Ọ bụ ezie nwekwara gburugburu ebe obibi dabere na Server X.Org nke dị dị ka nhọrọ nke abụọ.
Site na Gnome na ndabara, a na-ewepụ nchịkọta gburugburu desktọọpụ KDE na ndepụta ahụ naanị nkwado Gnome ka fọdụrụ.
Ọzọkwa guzo apụọ Ngwuputa GCC 8.2 qA na-eji ya dị ka ihe nchịkọta ndabere na ụlọ ọrụ Glibc ka emelitere na mbipute 2.28.
Uhie okpu Enterprise Linux 8, nwere a nkewa n'ime ebe nchekwa baseOS base na AppStream modular repository.
Na BaseOS, a na-ekesa obere ngwugwu achọrọ maka ịrụ ọrụ sistemụ, a na-ebufe ihe ọ bụla na nchekwa AppStream.
Enwere ike iji AppStream mee ihe na nsụgharị abụọ: dị ka ebe nchekwa RPM a ma ama na ebe nchekwa na usoro modular.
Ihe nchekwa modul na-enye usoro nke rpm nchịkọta agbakọtara n'ime modulu, nke a na-echekwa n'agbanyeghị ụdị nkesa.
Enwere ike iji modulu wụnye nsụgharị ndị ọzọ nke ngwa a kapịrị ọnụ (dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịwụnye PostgreSQL 9.6 ma ọ bụ PostgreSQL 10).
Nzukọ modular na-enye onye ọrụ ohere ịgbanwe gaa na isi nsụgharị ọhụrụ nke ngwa ahụ n'echeghị ụdị ọhụrụ nke ihe nkesa ma nọrọ na nke ochie, mana ka na-arụ ọrụ kwekọrọ, mgbe emelitechara nkesa nkesa.
Modul ndị ahụ gụnyere isi ntọala na ọba akwụkwọ dị mkpa maka ọrụ ha (a pụrụ iji modulu ndị ọzọ dị ka ndabere).
Mgbanwe ndị ọzọ
Red Hat Enterprise Linux 8 na-agbakwụnye ndabara ntinye nke asụsụ mmemme Eke Ọgba 3.6, mgbe na ụdị a, a ga-enwe oke nkwado maka Python 2.7.
Ebe ọ bụ na Red Hat Enterprise Linux 8, yana nsụgharị ọhụrụ nke nkesa Linux dị iche iche, Mbugharị na Python 3.x na-amalite, ebe mbipute 2.x adịkwaghịzi adị.
Banyere ngwaọrụ sistemụ, anyị nwere ike ịkọwapụta mgbakwunye nke Stratis Toolkit, Ọ na-enye ụzọ iji jikọta ma mee ka nhazi na njikwa nke otu otu site na otu ma ọ bụ karịa mpaghara draịva.
A na-etinye Stratis dị ka akwa (stratisd daemon) wuru n'elu ngwaọrụmapper na XFS subsystem, ma na-enye gị ohere iji atụmatụ dịka oke oke nke oghere nchekwa, snapshots, hụ na iguzosi ike n'ezi ihe ma mepụta ọkwa maka ikpuchi, na-enweghị onye ọkachamara njikwa nchekwa.
Dị ka e kwuru ná mmalite, Ejiri ihe ndozi, ip6table, arptables, na ebtable dochie ihe nzuzu, nke a na-eji ugbu a na ndabara ma bụrụ ihe ama ama maka ịme ka ntinye nzacha ngwugwu maka IPv4, IPv6, ARP, na akwa ntanetị.
Na kernel larịị, Nftables na-enye sọọsọ ọnya na-anọghị na nkwekọrịta ọfụma ma na-enye ọrụ ndị bụ isi iji wepụ data sitere na ngwugwu, rụọ ọrụ data, na njikwa njikwa.
N'ime mgbanwe ndị ọzọ anyị nwere ike ịkọwapụta:
Anaconda installer tinyere nkwado maka ịwụnye sistemụ na draịva NVDIMM.
Agbakwunyere ngwa ngwa Composer ọhụrụ, nke na-enye ngwaọrụ iji mepụta sistemụ sistemụ akpụkpọ ụkwụ dabara adaba maka nkenye ọnọdụ gburugburu igwe ojii.
Emeela nkwado maka faịlụ Btrfs. Ngwakọta ahụ anaghịzi agụnye btrfs.ko kernel modul, ihe btrfs-progs, yana ngwugwu snapper;
Nye usoro nkwado maka sistemụ smart na HSMs (Akụrụngwa Nchedo Akụrụngwa) na akara PKCS # 11.
Si ị chọrọ ịmata zuru ndepụta nke ihe ohuru ohuru nke Red Hat Enterprise Linux 8 na-enye ị nwere ike ịga njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Emeputara ohuru nke Red Hat Enterprise Linux 8
Chere maka ntọhapụ nke Centos 8 / Oracle 8 !!
A ga-akpọ Ubuntu 19.10 "Eoan Ermine", ga-abata na Ọktọba 17
Emeelarị ụdị ọhụrụ nke 9.1 nke GCC compiler